osisi hanger Suppliers na Factory - China osisi hanger Manufacturers
Ihe njide ihe ọkụkụ igwe eji ejide oriọna
Nhazi nkwado igwe mara mma maka oriọna kwụgidere,osisi, ulo nnụnụ,igwe ikuku wdg.
Ihe: Mere nke 100% elu mma ígwè metal, na nchara-proof elu na siri ike ewu, a mgbidi hanging na-adịgide adịgide na mara.Ọ dabara maka ịkwagide osisi n'ime ụlọ na n'èzí.
Ihe ndozi ụlọ: Ihe ndozi osisi vintage na-agbakwunye mmetụ nke ụdị ime obodo na ntinye, patio, ubi, ime ụlọ, ebe iri nri na ebe ọ bụla ọzọ dị n'ime ụlọ.
Ọ dị mfe ịwụnye:Intpro osisi nko naanị site na iji a akuakuzinwo na screwdriver, ugwu na drywall ma ọ bụ a mgbidi stud na otu fastener.Ha dabara nke ọma na ụdị mgbidi ọ bụla, dị ka drywall na stud mgbidi.Agbatịkwara.
Dị Mfe na Multipurpose:Nko dị elu maka osisi kwụgidere bụ nko zuru oke maka ikuku chime, ite ifuru, ọkụ eriri, lantern, ihe ịchọ mma nnụnụ, osisi ite ma ọ bụ ọrụ DIY ndị ọzọ, ihe nkwudo osisi siri ike maka ịkwanye ihe ọkụkụ n'ime ụlọ & n'èzí.
24 Awa mgbe ire nzaghachi:Intpro nwere ike inye gị ahụmịhe ndị ahịa kacha mma yana ọrụ ịre ahịa.Biko nwee obi ike ịzụta, ọrụ ndị ahịa anyị ga-edozi nsogbu gị n'ime awa 24.Naanị jiri obi ike zụta!
Size:6"L,8"L.10"L.12"L,18"L ma ọ bụ ahaziri.
Mmecha: Ntụ ọka matte na-adịgide adịgide.
Ọ dị mfe ịwụnye: na-abịa na skru na-arị elu na arịlịka.Nkosa ihe ọkụkụ dị mma maka ogidi osisi, ogidi oche, ma ọ bụ ọbụna mgbidi ime ụlọ.Ndụmọdụ gbagọrọ agbagọ na-enyere aka chekwaa ihe.
A na-eji ya eme ihe: Ọ dị mma maka ịgbanye ọkụ anyanwụ, mason jar sconces, nkata ifuru samll, yinye mmiri ozuzo, ụlọ nnụnụ, ihe ndozi ezumike.
Ngwa ndị dị mma maka ọnụ ụlọ gị, ime ụlọ ịwụ, ime ụlọ, ọnụ ụzọ mbata, patio, ihe owuwu ụzọ mbata, ogige, ogige osisi n'azụ ụlọ ngere ọ bụla ọzọ dị n'èzí.
Osisi ọla eji achọ mma, oriọna, ihe mkpuchi ikuku chime.
Ihe: A na-eji ígwè dị elu mee akwa akwa ma kpuchie ya na ntụ ntụ, ha na-egbochi nchara ma nwee ogologo ndụ ọrụ.Ọdịmma adịchaghị mma na-eme ka ha sie ike na imecha ojii na-eme ka ebe obibi gị maa mma ma dakọtara ihe ọ bụla dabere na ya.
Akara: Akara ahaziri dị.
Nkwakọ ngwaahịa: nkwakọ ngwaahịa nchekwa, nkwakọ ngwaahịa agba aja aja, igbe agba ma ọ bụ nkwakọ ahaziri ahazi.
Oge nlele: 5-7 ụbọchị.
Oge mmepụta: Nọmalị 15-20 ụbọchị.Mmepụta oge bụ negotiable.
Mbupu: site na ikuku, n'oké osimiri na ụgbọ oloko.
ọdụ ụgbọ mmiri FOB: ọdụ ụgbọ mmiri Guangzhou / ọdụ ụgbọ mmiri Shenzhen.
Usoro ịkwụ ụgwọ: TT/Paypal/Western Union ma ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ kpara nkata.
Ọ dị mfe ịwụnye: gụnyere ngwa nwụnye, kwụgidere ndị na-akụ ihe ọkụkụ gị, nkata ifuru na ihe ndozi ubi ndị ọzọ site n'enyemaka nke ihe nkwado osisi a.
Ihe ndozi ụlọ: Tinye ọmarịcha mma n'ụlọ gị ma ọ bụ n'ubi gị site na iji akwụkwọ mpịakọta vine anyị haziri nke ọma.
Ihe nkwado osisi siri ike: A na-eji ígwè nkedo na-adịgide adịgide rụọ ihe nkwado ahụ, ihe mkpuchi ojii nwere mkpuchi maka nchara dị elu, na-agbakwụnye mmetụ nke ịma mma na mbara ala ọ bụla.
Ihe nkwado igwe ọnwa&Cat maka osisi kwụgidere, lantern, ụlọ nnụnụ, chime ikuku.
l CAT&on metal bracket imewe maka nghọtahie, osisi, ụlọ nnụnụ,igwe ikuku wdg.
l Ogo na-ekwenye ekwenye: Ngwa ígwè ejiri aka kpụọ na nka mara mma na-eme ka nchara nchara na sie ike.Agaghị agba agba, ma nwee ike idi mbibi nke mmiri ozuzo, snow na ìhè anyanwụ.
l Ọtụtụ ebumnuche: Mee ka ụlọ gị ma ọ bụ ubi gị mma site n'ikogide ndị na-azụ nnụnụ, ọkụ ọkụ, ihe ọkụkụ, ite ifuru, ihe ịchọ mma ezumike, ọkụ eriri, ikuku ifufe, ihe ịchọ mma na ndị ọzọ!
l ihe: carbon ígwè
l Size:6"L,8"L.10"L.12"L,18"L ma ọ bụ ahaziri.
l mechaa: ntụ ntụ kpuchiri matte ojii na-adịgide adịgide.
l Ọ dị mfe ịwụnye: na-abịa na skru na-arị elu na arịlịka.Nkosa ihe ọkụkụ dị mma maka ogidi osisi, ogidi oche, ma ọ bụ ọbụna mgbidi ime ụlọ.Ndụmọdụ gbagọrọ agbagọ na-enyere aka chekwaa ihe.
l Stylish: Mpekere osisi kwụ ọtọ nke pere mpe na-enye ọmarịcha ọmarịcha ọdịdị ọdịnala.Ngwunye ọcha ma ọ bụ oji na-eju anya na-emeju ihe ọ bụla na-adabere na ya, na-agbakwunye ịdị mma na ịma mma n'ụlọ gị ma ọ bụ ubi gị.Ihe nkedo na-acha ọcha/oji dabara na-edobe anya na-agbanwe agbanwe, mara mma.
l Mgbe ọrụ ire ere: Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla na ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ anyị naanị.Anyị ga-eji obi dum jeere gị ozi.Anyị na-atụkwa anya na ị ga-enwe ahụmịhe ịzụ ahịa dị ụtọ na ụlọ ahịa anyị.
l OEM & ODM: Anyị na-eme ihe niile ahaziri metal ngwaahịa.Anyị nwere ọkachamara imewe otu ndị nwere ike ịmepụta aghụghọ dị ka ndị ahịa 'echiche.Naanị mee ka anyị mara ma ị nwere echiche ọ bụla n'uche gị.Anyị ga-eme ka echiche gị mezuo.
Mpempe osisi nru ububa igwe igwe kwụgidere ihe ọkụkụ
Size:6"L, 8"L, 10"L, 12"L,18"L ma ọ bụ ahaziri nha.
Ihe: Nchara dị mma
Ọ dị mfe ịwụnye: ihe nkwado ọ bụla na-abịa na skru na-arị elu na arịlịka.The metal ịghasa nwere ike ata n'ime osisi ma ọ bụ mgbidi ngwa ngwa na mfe, otú dị nnọọ chọta a larịị elu na ị nwere ike malite gị ịchọ mma atụmatụ.
Multi-nzube: Akwa maka nghọta anyanwụ ọkụ, mason jar sconces, obere ifuru nkata, wain yinye, nnụnụ ụlọ, na ezumike decorations. Decorate ụlọ gị na ubi, na-agbakwunye a mmetụ nke vintage mma!
Ngwa ndị dị mma maka ọnụ ụlọ gị, ime ụlọ ịwụ, ime ụlọ, ọnụ ụzọ mbata, patio, ihe owuwu ụzọ mbata, ogige, ogige osisi n'azụ ụlọ na ebe ọ bụla ọzọ dị n'ime ime ụlọ.
Banyere anyị: Ọrụ anyị bụ LASER CUTTING.Anyị na-arụpụta ụdị ngwaahịa ọla ọ bụla.SHENGRUI na-enye ngwaahịa dị elu yana ọrụ ọrịre ahịa nke ọma.Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ anyị.Anyị ga-enye gị ngwọta ozugbo enwere ike.
Nhazi ihe nkwado igwe BIRD maka oriọna kwụgidere,osisi, ulo nnụnụ,igwe ikuku wdg.
Akụrụngwa: Ihe nkwado Bird Bird a kwụgidere bụ igwe dị mma ma were ntụ ojii kpuchie ya.Ha na-emegide nchara ma nwee ogologo ndụ ọrụ.Ọdịmma adịchaghị mma na-eme ka ha sie ike na imecha ojii na-eme ka ebe obibi gị maa mma ma dakọtara ihe ọ bụla dabere na ya.
Igwe mgbidi ọla, Onye nhazi nko igodo, Ngosipụta njide olu, Mgbodo osisi nkwudo mgbidi, Nko njide igodo, Osisi ite Hangers,